TAARIIKHDA MAANTA: | DAABACADA WARKA: September 18, 2002
1-Faafaahin la xidhiidha qarixii ka dhacay magaalada Addis Ababa
2-Laba nin oo Itoobiyaan ah oo lagu xidhay magaalada Burco
3- Xaflad ballaadhan oo lagu soo dhaweeyay Waftigii Jabuuti ee Shirka IGAD
4-Wasiirka gaashaandhigga Eritereya oo la kulmay dhiggisa Ireland 5-Shirkii dib u-heshiisiinta soomaalida oo mar kale dib loo dhigay
1-Faafaahin la xidhiidha qarixii ka dhacay magaalada Addis Ababa.
Iyadoo aan weli la caddaynin ciddii ka dambeysay qarakii toddobaadkii hore ka dhacay Hotel Tigray oo ku yaalla magaalada Addis Ababa ayaa wararku sheegayaan in dadka ku dhaawacmay ay gaadhyaan ilaa 38 qof, ilaa 2 qofna ay ku dhinteen.
Dhaawaca qaraxaasi ayaa loo kala qeybiyay isbitaalada dadwaynaha iyo qaar ka mid ah isbitaalada ciidamada ee ku yaala magaalada Addis Ababa.
Hotel Tigray ayaa hada ka hor sidaas oo kale loo qarxiyay iyada oo lagu sheegay in ay Jabhadda Xoreynta Oromiya ka dambeeysay qaraxaasi.
2-Laba nin oo Itoobiyaan ah oo lagu xidhay magaalada Burco.
Ciidanka booliska ee magaalada Burco ayaa toddobaadkii hore xabsiga u taxaabay laba nin oo Itoobiyaan ah oo lagu eedeyay inay fidinayeen diinta masiixiga.
Labadaasi nin waxaa la socday 10 qof oo soomali ah oo isugu jira rag iyo dumar, kuwaasoo la shaqaynayay.
Sida wararka sheegayaan, labadaasi nin ee Itoobiyaanka ah waxay ka mid yihiin koox Itoobiyaan ah oo ku howllan fidinta diinta masiixiga, kuwaasoo ka hawlgala meelo Soomaaliya ka tirsan.
3-Xaflad ballaadhan oo lagu soo dhaweeyay Waftigii Jabuuti ee Shirka IGAD
Waxaa Totobaadkii Hore magaalada Nayroobi ka dhacday xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay, taasoo casho sharaf loogu sameeyey Wafdigii Jabuuti uga qayb galay shirkii Wasiirada Arrimaha Dibadda ee IGAD oo ka dhacay magaalada Nairobi.
Xafladaas oo lagu qabtay hudheel ku yaalla magaalada Nairobi waxaa soo qaban qaabiyay waxgaradka soomaaliyeed ee dalka Kenya, waxaana ka soo qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti Cali Cabdi Faarax iyo La-Taliyaha Madaxwaynaha Jabuuti Xaashi Cabdalle Oorax.
Dhinaca Kenya waxaa ka soo qayb galay mudane Faaraxa Macallin oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ee sida wayn looga qadariyo dalka Kenya, waxaa kaloo ka soo qaybgalay dad badan oo caan ah oo isugu jirey ganacsato iyo aqoonyahaniin ay ka mid ahaayeen qoraaga caanka ah Aw Jaamac Cumar Ciise, Dr. Maxamed Cabdi Gaandi iyo kuwa kale.
Waxaa halkaas ka hadlay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Jabuuti oo Soomaalidii xafladda fadhidey si qoto dheer ugaga xog warramay hannaanka uu shirka Eldoret u dhici doono, wuxuuna Wasiirku sheegay inay iyagu Madaxweyne Moi ka codsadeen inuu dib u heshiisiinta Soomaaliya dhamaystiro, isagoo Carrabka ku dhuftay inay jiraan dawlado aan doonayn inuu shirka qabsoomo.
Dhinaca kale waxaa xafladaas ka hadlay Mudane Faarax Macalin oo ah Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Safina.
Mudane Faarax wuxuu sheegay in loo baahan yahay inay Soomaalidu tashato oo ay danteeda garato, cidna aanay wax-qabad ka sugin.
Wuxuu kaloo intaas ku daray ”Jabuuti iyo anagu midkayana ma jiri karo haddii ayna Soomaaliya dowlad ahayn”
4-Wasiirka gaashaandhigga Eritereya oo la kulmay wasiirka Gaashaandhiga ee Ireland.
Wasiirka gashandhiga ee dalka Eritereya Jeneraal Sebxaat Efrem ayaa dhammaadkii toddobaadkii hore la kulmay dhigiisa dalka Ireland general Mikaal Smith.
Labada wasiir waxay ka wada-hadleen xaalada nabadgalyo ee gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan xiriirka Itoobiya iyo Eritereya.
Wasiirka Gashandhiga Eritrrya Jeneraal Sebxaat Efrem ayaa mahad u celiyay General Smith sida ay ciidanka Irishku uga qeyb galeen ciidanka Jamciyada Qarumaha ka dhaxeeysa ee haatan ilaaliya soodinta u dhaxeeysa dalalka Eritereya iyo Itoobiya.
5-Shirkii dib u-heshiisiinta soomaalida oo mar kale dib loo dhigay.
Iyadoo hadda ka hor 3 goor dib loo dhigay shirka dib u-heshisiinta soomalida oo la filayo inuu ku qabsoomo dalka Kenya, siiba magaalada Eldoret ayaa haatan la sheegay in mar kale dib loo dhigay.
Sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaarada arrimaha dibbeda Kenya, waxuu shirka qabsoomi doona 15ka bisha Oktoobar waxaana la filayaa inay wufuudu yimaadaan Nairobi 10 ilaa 12-ka bisha oktoobar, markaasoo ay billaaban doonto inay is diiwaangeliyaan inta aan loo qaadin xarunta shirka ee Eldoret.
Sida uu sheegay wakiilka Kenya u qaabilsan Soomaliya Elije Mwangale waxaa shirka guddoomin doona madaxweynaha Kenya Daniel Arap Moi, waxaana ka soo qeyb gali doono dowladda ku meelgaarka ah ee Soomaliya, kooxaha gacan saarka la leh Itoobiya , maamul-goboleedyada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.
Sidoo kale waxaa shirka ka qeyb gali doono Dalalka Mareykanka, Sacuudiga, Masar, Yemen, Norway, Faransiiska, Talyaaniga iyo ergo ka kala socta Jaamacada Carabta, Ururka Dalalka Islaamka iyo Midowga Afrika, ururka barwaaqa sooranka ee COMESA.
Sidoo kale waxaa la filaya in dalalka Liibiya, Imaraadka Carabta iyo Qatar ay soo diraan ergooyin gaar ah.